“पोल्यान्डमा रुन मात्र सकेन “,जीवा लामिछाने सरसर्ती संसार | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
“पोल्यान्डमा रुन मात्र सकेन “,जीवा लामिछाने सरसर्ती संसार
October 27, 2017 by POLAND NEPAL
जीवा लामिछाने सरसर्ती संसार
पोल्यान्डको एउटा घटना उल्लेख गर्नैपर्ने खालको छ–
हामी बर्लिनका लागि यात्रारत थियौँ । त्यसो त म यसअघि पनि बर्लिन नपुगेको होइन । एक मित्र गुप्ताजी र म दिनभर वार्सा घुमेर साँझ बर्लिनका लागि रेल चढ्यौँ । तर, नसोचेको घटना भयो !
हामी रेल चढ्नेवित्तिकै आठ–दश जना युवा ठेलमठेल गर्दै रेलभित्र पसे !
सिटमा गएर के बस्न भ्याएका थियौँ, गुप्ताजी चिच्याइहाले, “चोरले मेरो वालेट झन्डै उडाएको यार !”
म पनि सजग भएर हत्त न पत्त गोजीमा हात पुर्‍याउँछु त चोरले अघि नै वालेट उडाउन भ्याइसकेछ । खङ्ग्रङ्ग भएँ । युरोपमा पाकेटमारको फेला परिएला भन्ने कल्पना मैले कसरी गर्नू !
वालेटमा नगदमात्र थिएन, अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनीको ट्राभलर्स चेक पनि थियो । दुवै एकसाथ चोरी भएछ ! रुनमात्र सकिनँ !
हराएको चेक जारी गर्ने कम्पनीबाट सोधभर्ना लिन सन्थ्यिो तर आफ्नै हुस्सुपनका कारण बैंकले दिएको अमेरिकन एक्सप्रेस चेकको सिरियल नम्बर र खरिदका प्रमाणहरू मैले जतनसाथ राखेको थिइनँ, सोधभर्ना लिन सकिने कुरै भएन ।
रेलको डब्बामा चोरको ठूलै ठफ्फा रहेछ, पछिमात्रै थाहा पायौँ । उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसैले सुरुक्क अर्को डब्बामा गयौँ ।
पहिलो पटक रुस जाने क्रममा काठमाडौंमा भेट भएका प्याट्रिस लुमुम्बा विश्वविद्यालय (मस्को)मा पढ्ने डा. अब्दुल मतिनले मैले आफूले उपयोग गर्न सक्ने पूरै सटही सुविधा लिन नसक्ने थाहा पाएपछि आफ्ना लागि केही डलर लगिदिन अनुरोध गरेका थिए । मैले उनका लागि अमेरिकन एक्सप्रेसको ट्राभलर्स चेक लिइदिएको थिएँ । चेकमा सकेसम्म हस्ताक्षर नगर्न उनले सम्झाएका थिए तर बैंकले चेक लिँदा हस्ताक्षर नलिई किन मान्थ्यो र !
मस्को पुगेपछि म उनलाई चेक फिर्ता गर्न गएँ । उनले चेकमा जसको हस्ताक्षर छ, उसैले मात्र उपयोग गर्नसक्ने भन्दै चेक मलाई नै फिर्ता गरे ।
अब म आफैंले त्यो चेक साटेपछि मात्रै उनलाई भुक्तानी दिन सक्ने भएँ । चेक चोरी भएकाले उनको त्यो रकम मैले अर्कोपटक बर्लिन जाँदा बचत गरेको नाफाबाट मात्रै फिर्ता गर्न सकेँ । थोरै संगतमा भरोसायोग्य बनेका ती विद्वान मित्रको काम एउटा चोरीका कारण बिथोलियो । यता असल मानिसको काम भरपर्दो तरिकाले गर्न नसकेकामा मलाई आज पनि पछुतो भइरहेको छ ।
“उक्त सामग्री गैर आवासीय नेपाली संघका अभियन्ता जीवा लामिछानेद्दारा लिखित सरसर्ती संसारबाट साभार गरिएको हो “
← “जन्म दर्ता कागज पत्र प्रमाणीकरण के गर्भाधान प्रक्रिया हो र ९ महिना कुर्नु पर्ने, ” न्यौपाने
इनास ग्लोबल उपाध्यक्षमा पोल्यान्डबाट पानी अभियानकर्ता मित्र लाल पार्देलाई मनोनयन →